Mpitondra eletram-by elektrika SEPT16 - mpamatsy paositera elektrika atsimo atsinanana SEPT16 Mpamatsy, Factory –CHONGHONG
PS sombin-tsoratry ny sombin-tsolika
Home » Fananganana fitaovana sy kojakoja » Pallet kamio
Mpitondra paositera enina SEPT16
1. Ny bateria dia azo soloina ao anatin'ny iray minitra, ary ny fandidiana dia tsotra sy mora. Raha ampiasain'ny batterie misy batery hafa dia afaka mamaha ny olan'ny asa mitohy amin'ny rafitra kilasy marobe izy io ary tsy mila miandry mihitsy.
2. Ny frein azo antoka sy azo antoka kokoa. Voavaha ihany koa ny olana fa ny frein manual an'ny electromagneticbrake dia tsy azo sintomina tanana. Raha tsy manam-pahefana ianao, dia mbola afaka mampiasa ny kamio pallet manual.
3. Ny fanandramana enta-mavesatra feno dia maharitra mihoatra ny 4 ora vao mahafeno tanteraka ny zavatra ilaina isan'andro. Mandany adiny 3 fotsiny ny chargemore mihoatra ny 95% ny herinaratra. Mamaha ny olana izay ilain'ny batterie asidra firaka miandry fotoana maharitra hiampangana azy, hampitombo ny mahavoky ny fiara manontolo, ary hanatsara ny fahombiazan'ny asa.
4. Ny fiara dia manana 48V / 650W brushless DCmotor sy ny mpanara-maso mifandraika amin'izany, miaraka amin'ny hery matanjaka sy fikojakojana mety.
Max. Entana (kg)
Halaviran'ny kodiarana: FR (Standard Fork / Narrow Fork) (mm)
Fitaovana kodiarana FR / RR
Isan'ny kodiarana (Kodiarana mitondra / kodiarana voalanjalanja / kodiarana aloha)
Haben'ny kodiarana (mm)
Bearing Wheel Wheel (mm)
Ny haavon'ny fanondrahana fork avy amin'ny tany (mm)
Halavan'ny fork amin'ny tany (max) (mm)
Halavan'ny fork amin'ny tany (Min) (mm)
Ny sakan'ny fork (ivelany) (mm)
Halavan'ny fork (mm)
Sakany tanteraka (mm)
Haavo tanteraka (mm)
Miovaova radius (mm)
Min aisle Ny sakan'ny fametahana zoro ankavanana (pallet1000x1200mm) (mm)
Max. Haingam-pandeha (Valiny feno / Tsy misy enta-mavesatra) (km / ora)
Fahaizan'ny kilasy (%)
Motor mitondra fiara (kw)
Tselatra bateria (v)
Capacity bateria (Ah)
Milanja bateria (kg)
Milanja tanteraka (Ampidiro ny bateria) (0